သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်ရဲ့ တန်ဖိုးကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုပြလိုက်တဲ့ မေပန်းချီ – အနုပညာရပ်ဝန်း
ပရိသတ်ရဲ့အချစ်တော်အနုပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့ မေပန်းချီနဲ့ ဘေဘီမောင်တို့ကတော့ အနုပညာလောကကို ဝင်ရောက်လာတဲ့အချိန်လည်း မကွာခဲ့သလို ကိုယ်စီပင်ကိုယ်အရည်အချင်းအပြည့်နဲ့ ပရိသတ်အသိမှတ်ပြုအားပေးခံရဖို့ ကြိုးစားခဲ့ကြသူတွေပါ။ တစ်ယောက်အခက်အခဲနဲ့ ကြုံချိန်တိုင်းမှာ တစ်ယောက်က အားပေးခဲ့ကြပြီး အနုပညာအသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာ အနုပညာညီအစ်မတွေအဖြစ်နဲ့သာမက သူငယ်ချင်းကောင်းတွေအဖြစ်နဲ့ပါ စိတ်တူကိုယ်တူ ရှိခဲ့သူတွေလို့ ဆိုရမှာပါ။
ဒီနေ့မှာတော့ နှစ်ယောက်သားတွဲလျက်ပုံလေးတွေနဲ့အတူ မေပန်းချီကတော့ သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်ရဲ့တန်ဖိုးကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုပြခဲ့ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းဆိုတာ လွယ်လွယ်ဖြစ်လာတဲ့ နာမ်စားတစ်ခုတော့ မဟုတ် အဆင်မပြေမှုတွေ… နားလည်မှု လွဲမှုတွေ…. သဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်မှုတွေ… စိတ်အဖုအထစ်တွေ အခက်အခဲတွေ ကိုကျော်လွှားပြီးတဲ့အချိန်တစ်ခုရောက်မှ ကျန်ခဲ့တဲ့အရာပါ…. ဒါတွေ ကို ပွင့်လင်းစွာ မညှိနိူင်းနိုင်ရင်တော့ သူငယ်ချင်းကောင်းဆိုတာ မင်းအတွက်ရှားပါးနေအုံးမှာပဲ… အသက်အရွယ်ရလာတာနဲ့အမျှ နားလည်လာတာတစ်ခုက အပေါင်းအသင်းကြား စိတ်အဖုအထစ်တွေကို ပွင့်လင်းစွာ ဖြေလျော့ ဖို့ပါပဲ… သင်မှားလျှင် တောင်းပန်ဖို့ဝန်မလေးဘဲ သူမှားလျှင်လည်း ထောက်ပြဖို့ဝန်မလေးပါနဲ့ တဒင်္ဂအတွေးလေးတစ်ခုနဲ့ အပေါင်းအသင်းကောင်းတွေကို သင် မဆုံးရူံးစေပါနဲ့ ဆိုပြီး ရေးသားမျှဝေလာပါတယ်။
ပရိသတ်ကြီးရေ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ ကင်းကွာပြီး တစ်ယောက်တည်းနေထိုင်တဲ့သူဆိုတာ မရှိသလောက်ပါပဲနော်။ ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကြုံတွေ့ပတ်သက်လာရသမျှ လူတွေအများကြီးထဲမှာမှ ကိုယ်နဲ့ စိတ်တူကိုယ်တူရှိမယ့် တိုင်ပင်ဖော်တိုင်ပင်ဖက် သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်လောက်ရှိဖို့ကလည်း ကိုယ့်ရဲ့ ဝမ်းနည်းမှု ပျော်ရွှင်မှုတွေကို မျှဝေဖို့အတွက် တကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုပါပဲ။ မေပန်းချီကတော့ ဘေဘီမောင်ကို သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်အဖြစ် ပိုင်ဆိုင်ထားသလို ပရိသတ်ကြီးကိုလည်း သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက် ပိုင်ဆိုင်ရဖို့ မာန်မာနတွေမထားဘဲ ပွင့်လင်းရိုးသားကြဖို့ အကြံပေးခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။